UGaudí -Uhambo ngemisebenzi yakhe emikhulu enje ngeCasa Batlló | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana godoy | 31/05/2021 09:10 | España
UAntoni Gaudí wayengomnye wabakhi bezakhiwo ezinkulu kunye nommeli ophezulu kwi-modernism yaseSpain. Kananjalo, usishiyele ilifa elikhulu onokuthi ulindwendwele namhlanje ukuze uqhubeke nokuyithanda imisebenzi yakhe, engayi kukushiya ungakhathali esaziyo. Enye yazo yiCasa Batlló kodwa inezinye ezininzi ekufuneka sizazi okanye sisondele kuzo.
Yiyo loo nto sikhethe ukwenza ifayile ye- Uhambo olubonakalayo kweminye yemisebenzi ebonakalayo kunye nengqikelelo yobukrelekrele. Zonke zinokuphela kobuqu, bokuyila kunye nokucinga okubonelela ngeziphumo ezizodwa. Into eyayibonakalisa njengoyena mntu wanamhlanje. Masipakishe kuba sithatha uhambo!
1 I-Sagrada Familia ngu-Antoni Gaudí
2 UCasa Batlló
3 Ipaki yeGuell
4 Indlu yeVicens
6 Indlu yeebhutsi
I-Sagrada Familia ngu-Antoni Gaudí
I-basilica ebekwe e-Barcelona yenye yezona zinto zindwendwelweyo, kwaye ukwakhiwa kwayo kwaqala ngo-1882, ukuba yenye yezona nkonzo zide emhlabeni. Nangona enezinto ezininzi, sinokuthi yinto yakhe yobugcisa ebalaseleyo. Oku kwamthatha iminyaka emininzi yobomi bakhe kwaye, kunye nayo, wafikelela kwixesha lezendalo, esele kwinqanaba lokugqibela lomsebenzi wakhe, apho ibiya kuba sisishwankathelo esikhulu sakho konke oku kungentla. Eyona tempile inkulu yayenziwe ngendlela ye-organic ngaphandle kwenxalenye ye-crypt eyayise-Neo-Gothic. Ubume bejiyometri abunakusilela, kwaye nokufana kwendalo akunakusilela. Ukuba awukayindwendweli okwangoku, awunakuphuthelwa nguloo mfuziselo UAntoni Gaudí!
Kule meko, sithetha ngokulungiswa kwesakhiwo, esisePaseo de Gracia e-Barcelona. Singatsho ukuba sikwixesha likaGaudí lendalo, apho walungisa khona eyona ndlela yakhe kwaye ukuphefumlelwa kwakhe kwavela kwindalo. Xa sele nditshilo, utyelelo eCasa Batlló inokuba yenye yezona ndawo zibalaseleyo kwiimvakalelo zakho. Ngoba? Ewe, ngenxa yokuba undwendwelo lunokubonga kakhulu kubukrelekrele bokuzenzela, isandi sebhinari okanye isenzi eshukumayo. Ngamanye amagama, indlela yokudibanisa kwihlabathi likaGaudí, lokubona oko wakubonayo okanye ukuziva indlela awayeziva ngayo ngomboniso we-audiovisual. Ngamava awodwa aya kuphendula imibuzo enje ngokuba yayiyintoni impembelelo yakhe, ukuba loo ngcinga yobukrelekrele yadalwa njani nayo yonke into eyayimngqongile.
Kolu tyelelo, uya kuphendula kuko konke oku nangaphezulu. Kuba uyakufumana igumbi lokuntywila apho uyakonwabela izikrini ezingaphezulu kwewaka. Kuzo Uya kufumanisa zonke iimfihlo zayo malunga nemvelaphi yayo 'eGaudí Dome'. Kodwa hayi kuphela ukubona kuya kwanela, kodwa ezona zandi zilungileyo ziya kukungqonga ngenxa yamajelo angama-21 alalelayo athabatha umoya wendalo kwaye ke, uqikelelo lwevolumetric, apho umlingo uya kuba ngaphezulu kunokwenyani.
Emva kokunandipha ukuqala kwayo okanye imvelaphi yayo, lixesha lokuba ungene engqondweni kaGaudí. Into ebonakala inzima ngokwenene! Kodwa ngoGaudí Cube, iya kufezekiswa. Igumbi elitsha apho ine-cube enamacala amathandathu e-LED. Ngayo uya kuba nakho ukutshintsha yonke imbono yokwenyani, kuya kukuthatha uye kwelinye ilizwe, kumnandi, kodwa uhlala ekunceda ngazo zonke izivamvo, ngaphandle kokulibala ukuba singaphakathi kwengqondo yengqondo. Ewe kunjalo, ngenxa yoku, bekukho umsebenzi opheleleyo wophando ngasemva kwayo. Ukhetho lwemizobo lwenziwe, kunye nemibhalo okanye iifoto kunye nezinye izinto, ngoncedo lobukrelekrele bokuzenzela, ezinike ubomi kule projekthi. Siza kubona ubunyani ngamehlo akhe kunye nophawu alushiyileyo emhlabeni.
Singena nini UCasa Batlló, siya kuzonwabela ezinye uqikelelo lobomi bakhe, imifanekiso yamandulo kwaye yonke le yindlela yokuhamba aye kwixesha lakhe. Enye into enqabileyo kukuba ngokusondela nje kumzobo, iisenzi zeshukumisi ezifakiweyo kuzo ziya kuqala imveliso encinci yefilimu, ngaloo ndlela kufunyanwe ulwazi oluthe kratya malunga nendlu kunye nenucleus yosapho. Ukugqiba ukonwabela lonke ilifa lakhe kodwa emntwini wokuqala, ukuyenza yamava omlingo ekufuneka uphile, ubuncinci, kube kanye ebomini. Ngaba unesibindi sokufumanisa isimanga sayo?
KwiNtaba iCarmelo, emantla ntshona eBarcelona, ​​sifumana IPaki Güell, yenye yemisebenzi eyaziwayo kakhulu kaGaudí. Xa simbona, siyazi ukuba naye ungena kwixesha lendalo kwaye uyonwabela indlela yakhe yobuqu. Kuyo sinokufumana ezona mbombo zikhethekileyo ezifana nomthombo waseSan Salvador de Horta okanye umbono weNtengiso kaJoan, apho ungonwabela khona umbono we-panoramic weBarcelona. Sele ekungeneni kuphela okanye kwiipalamente, sinokonwabela uninzi lwesitayile sobukrelekrele. Enye yeendawo ekufanele ukuba undwendwele kuzo kwaye ukuba sele wenze njalo, ukuhambahamba kuloo ndawo akubuhlungu.
Nangona zonke iiprojekthi zoyilo zinokubaluleka kwazo kunye nempumelelo emva kwazo, kule meko xa sithetha ngayo I-Casa Vicens, kufuneka sikhankanye ukuba yayiyenye yemisebenzi yokuqala awayenzayo emva kokufunda uyilo. Ke mhlawumbi, yongeza ixabiso ngakumbi, ukuba kunokwenzeka. Ngenxa yesi sizathu, sinokuyibeka kwixesha lase-orientalist, kuba linalo i-oriental brushstrokes uGaudí wayenomdla kakhulu kwiminyaka yakhe yokuqala. Isakhiwo esabhengezwa njenge-Asethi yoMdla weNkcubeko kwaye kamva, iNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi ngo-2005. Sishiya umbala omkhulu kwicala le-facade, ngenxa yokugqitywa kwayo kweekheram.
Nangona kuyinyani ukuba uninzi lwemisebenzi yakhe ibekwe eCatalonia, kule meko kufuneka sithethe ngayo 'whim' eya eComillas eCantabria. Kufuneka yenziwe kwakhona kwimpuma yeGaudí, apho iithayile zeceramic zezona zinto ziphambili, ukongeza kwiarches kunye nezitena. Njengoko usazi ngokuqinisekileyo, esi sakhiwo sajika senziwa imyuziyam, njengoko kungothusi. Ngokuzonwabisa nje nge-facade, iya kukuthimba!
Kuba sivule umnyango no-El Capricho, naye uyalandela ngokusondeleyo Indlu yeeBhotile. Kungenxa yokuba sesinye sezakhiwo ezingaphandle kweCatalonia kwaye ngakumbi eLeón. Kwimvelaphi yala maxesha, yayiyindawo yokugcina izinto kunye nendawo yokuhlala kwiminyaka yokuqala yobomi. Kodwa sele ngo-1969 yabhengezwa njengeLitye lesikhumbuzo leMbali yeNkcubeko, ibuyiselwa ngo-1996. Namhlanje ikwagcina imyuziyam kodwa igcina ubuhle bangaphambili, umongo kaGaudí kunye nokubonakalisa ubungqondi bakhe. Zeziphi ozityeleleyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » UCasa Batlló kunye neminye imisebenzi emikhulu yobungqondi uGaudí onokundwendwela